iCare 3.0 - Rafitra Man Down - Vahaolana fiarovana ny mpiasa irery - Vahaolana OMG
Tetikasa fanairana bokotra vonjy taitra maika
Tetikasa fakan-tsarimihetsika fakan-tsary / bug detector
Tetikasa GPS Tracker
iCare 3.0 - Man Down System - Vahaolana fiarovana ny mpiasa irery
Ny fikorisana sy ny fikapohana ary ny fahalavoana no endrika fototry ny lozam-piasana mitranga any amin'ny orinasa maro. Na hihena avy amin'ny haavo avo na manintona ny fantsom-pifandraisana, ny lozam-pifamoivoizana toy izany dia mety hiteraka ratra mafy, ary amin'ny tranga lehibe, eny fa na dia ny famonoana olona aza. Ny fahafantarana avy hatrany rehefa misy trangan-javatra toy izany dia mamela ny mpampiasa haingana hiantso vonjy maika sy hisorohana ny toe-javatra mahatsiravina. Tena ilaina indrindra izany amin'ny toe-javatra izay iasan'ny mpiasa irery ao amin'ny toerana mitokana. Sarotra ny miantso azy ireo amin'ny fotoam-pahoriana rehefa maratra, ary noho izany, ny fanairana ny fitaovana sy fitaovana dia lasa vahaolana malaza amin'ny toe-javatra toy izany.
Fitaovana Tracker GPS an'ny mpiasa iCare 3.0 afaka manara-maso ny satan'ny mpiasa amin'ny fotoana tena. Rehefa misy ny fianjerana, iCare 3.0 afaka mandefa fanairana amin'ny telefaona finday hafa ho azy, mba hahafahana manome fanampiana haingana
Ny mpiasa dia afaka manao antso na mandefa fampandrenesana ary fampandrenesana amin'ny tompon'andraikitra raha sendra misy maika.
Misongadina ao amin'ny Vaovao eo an-toerana ny vokatra
Ho an'ny mpiasa miasa amin'ny sehatra mampidi-doza indrindra toy ny fananganana, ny harena voajanahary, ny fitsaboana, ny fampiharana ary ny fitaterana, ny Aware 360 ​​dia manome vahaolana fiarovana tanteraka ho an'ny mpiasa mba hahazoana antoka fa ny mpiasa tsirairay dia afaka mahazo fanampiana na fanampiana ara-pitsaboana rehefa ilaina indrindra. Aoka ho aparitaka (GPS) fitaovana, fampiharana an-tariby na gadget hafa azo anaovana azy, antoka isika fa apetraka ny teknolojia mety isaky ny toe-javatra tokana.
Tsara indrindra ho an'ny:
- Mpiasa irery
- Mpiasa amin'ny tontolo mampidi-doza
- Mpiasa lavitra
1. Mini size, Waterproof IPX7, Rubber coating, mahatsiaro mahazo aina.
2. Fampandehanana bokotra fanairana SOS tsotra.
3. Fanentanana avy amin'ny feo rehefa nateraka ny fanairana sy ny fampahatsiahivana.
4. Fiantsoana roa.
5. Fanarahana ivelany GPS sy fanarahan-dia BLE / WIFI anaty trano.
6. Ny tobin'ny docking dia manome famahanana haingana sy mora ampiasaina.
7. Midina fanairana ho an'ny mpiasa sy ny mpiasa.
8. Fampandrenesana faritra azo antoka Geo, fihetsiketsehana / tsy misy fanairana sns.
9. Fihetsiketsehana sy sensor mihetsika.
10. Fifandraisana BLE 5.0.
11. Alefaso indray ny angona ho an'ny faritra jamba.
12. Teknolojia UBX GPS.
13. Avo GPS sy ny fanohanana AGPS.
14. Serivisy fanaraha-maso IOS / Android APP + WEB.
15. FOTA (fanavaozana ny firmware amin'ny alàlan'ny rivotra).
16. Lanja kely sy maivana, 1.4 oz ihany.
Fahalalana fahalavoana & familiana tsy misy mihetsika
Ny tsindrimpeo dia mamantatra tsara amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny sensor
Hira tokana hiantso
Ny mpiasa dia afaka mifandray amin'ny tompon'andraikitra amin'ny tsindry bokotra iray mandritra ny vonjy taitra.
Mora amin'ny fametrahana / tsotra & azo ampiharina (Loko 4)
Fampiharana amin'ny Internet sy finday ho an'ny fanaraha-maso (lalana ara-tantara / tena-misy)
Hozaraina ny rindranasa tranonkala sy finday avo lenta miaraka amina sehatra fanarahana. Azonao atao ny manamarina ny toerana misy ny fitaovana (làlana manan-tantara / ora tena izy) amin'ny PC, Tablet na Smartphone.
Famaritana ankapobeny modely GPS050D
lafiny 2.4 * 1.7 * 0.6 santimetatra / 61mm * 44mm * 16mm
Weight 1.4 OZ / 40g
Batterie backup Rechargeable, 3.7V, 850mAh
Fiatrehana ny tsipika 5V DC
Operating Temperature -20 ° C hatramin'ny + 80 ° C raha miasa
-30 ° C hatramin'ny + 70 ° C ho an'ny fitehirizana
Ny fiainan'ny aina Hatramin'ny 72 ora ampiasain'ny fampiasana mahazatra
Hardware Sensor Motion & vibration sensor
Connectors 4 Pin-Magnet ho an'ny famahanana
Sarin'ny karatra SIM Karatra SIM tsy misy
Mikropono natsangana ary mpandahateny
WIFI 802.11 b / g / n, 2.4G
Blé BT5.0 LE
GPS GPS chipset Ubx M8130 (fanampiana AGPS)
Support GPS sy Glonass
Fahita matetika mpandray 1575.42MHz
Fanombohana mangatsiaka manodidina ny 26s
Fanombohana mafana manodidina ny 2s
Fanombohana mafana manodidina ny 1s
Antenna Antenna seramika vita anaty
iCare Man Down System - Lisitry ny mpanjifa momba ny fiarovana ny mpiasa irery
Mpanjifa OMG Solutions - GPS040D - NUS 300x
Mpanjifa vahaolana OMG - QNET
Vahaolana OMG - Client - DOW
Solika OMG - Client - Jkeart Alliances
OMG Solutions Clients - ExxonMobil 250x
Mpanjifa vahaolana OMG - Shell
Mpanjifa vahaolana OMG - PUB
Mpanjifa OMG Solutions - SGEnable
Mpanjifa vahaolana OMG - Hopitaly lehibe ao Sengkang (SGH)
Client OMG Solution - Geylang Atsinanana trano ho an'ny efa antitra
Vahaolana OMG - Mpanjifa - Fitaovana tsy manam-paharoa V2
OMG Solutions Clients - STMicroelectronics
Mpandraharaha OMG Solutions - Homag Asia Pte Ltd
Mpanjifa OMG Solutions - Thermo Fisher siantifika
OMG Solutions - Klioban'ny Amerikanina Tobacco Singapore 250x
Mpanjifa OMG Solutions - CGG
Mpanjifa Solution OMG - Panasonic
Mpanjifa OMG Solutions - Amazon
Mpanjifa vahaolana OMG - Ademco V2
Mpanjifa vahaolana OMG - Starhub
Mpanjifa vahaolana OMG - M1
Mpanjifa OMG Solutions - BWC - UMC
OMG Solutions Clients - Medtronic Singapore Operation Pte Ltd 03
Ny mpanjifa OMG Solution - Parker
Solika OMG - Client - GPS040D - Services Mossad
Vahaolana OMG - Client - Soitec 250x
Vahaolana OMG - Mpanjifa - Biopolis
OMG Solutions Clients - BioTronik APM Pte Ltd
Mpandraharaha OMG Solutions - BIOMIN Singapore Pte Ltd
Mpanjifa OMG Solutions - Chr.Hansen Singapore 300x
OMG Solutions Clients - Fikambanana Alzheimer Singapore
OMG Solutions Clients - Autisme Association
Mpanjifa vahaolana OMG -Micron Singapore
Mpanjifa vahaolana OMG - Mandown - Jumby Bay
Mpanjifa Solution OMG - Mandown - Utan-tsaramaso
Mpanjifa vahaolana OMG - Sambo Keppel
Client Solution OMG - Lonework - AXA
Vahaolana OMG - Mpanjifa - GPS - Ivon-toerana momba ny teknolojia famokarana Singapore (SIMTech)
Mpivarotra vahaolana OMG - Ivotoerana fanamboarana sy teknolojia avo lenta
Vahaolana OMG - Mpanjifa - Vondrona fifanakalozana V2
Mpanjifa Solika OMG - MSF
Vahaolana OMG - Mpanjifa - Vahaolana famokarana Vitec
3394 Total Views 6 Views Today
Misaotra anao nisoratra anarana! Nisy mailaka fanamafisana nalefa tamin'ny adiresy mailakao.
Misy lesoka iray manandrana misoratra anarana aminao.
Andramo indray mandeha